Xiisaha iyo dhinacyada cilmiga xagaaga ee San Miguel | Saadaasha Shabakadda
Ku dhowaad sannad kasta, marka dhammaadka Sebtember yimaado, heerkulku wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco imaatinka xilliga dayrta. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro usbuuca Sebtember 29, heer kulka ayaa mar kale kor u kaca. Tan waxaa loo yaqaan xagaagii San Miguel. Waa usbuuc ay heer kulku kor u kacaan sidii inaan xagaagii ku laabaneyno.
Qodobkaan waxaad ku ogaan doontaa xiisaha iyo dhinacyada cilmiga xagaaga ee San Miguel. Ma rabtaa inaad ogaato dhammaan sirteeda?
1 Waa goorma xagaaga San Miguel?
2 Maxaa loogu magac daray Quince Summer?
3 Ma jiraa xagaa San Miguel sanad walba?
4 Caqabado iyo xagaa kale
5 Erayadii xagaagii San Miguel
Waa goorma xagaaga San Miguel?
Markay xagaagu bilaabato inay dhammaato, dad badan ayaa ka baqaya dhibcahaan heer kulka. Ku noqoshada shaqada, jadwalka joogtada ah iyo jiilaalka adag. Badanaa, heerkulbeeggu wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco markay bisha Sebtember wareegaan oo xilliga deyrta uu bilaabmo. Si kastaba ha noqotee, isbuuca dhamaanaya 29ka SebtemberMaalinta San Miguel, heer kulka ayaa mar kale kor u kacaya sidii haddii xagaagu soo noqonayo.
Inta lagu jiro xagaagan heer kulka 30 darajo ayaa laga gaaraa Spain. Waxay u egtahay in xagaagu u soo noqdo inuu sagootiyo ilaa sanadka soo socda. Magaca xagaagan yar waxaa sabab u ah dabaaldega maalinta San Miguel, oo ah Sebtember 29.
Meelaha qaarkood waxaa loo yaqaan Veranillo del Membrillo ama Veranillo de los Arcángeles. Waana inay tahay waqti yar oo leh heerkul aad u wanaagsan oo ka dhigaya gelitaanka qabow mid aad u wanaagsan. Waxa jira maalmo wakhtigan oo kale ah oo xadka u leh xaaladaha deegaanka ee xagaagii aan qabnay. Si kastaba ha noqotee, maalmo kadib dayrta ayaa laabanaysa iyadoo la socota hawadeeda qabow.
Badanaa waxay dhacdaa dhammaadka Sebtember iyo horraanta Oktoobar. Muddadan heerkulku sarreeyo kama qaybgaleyso arrimo gaar ah. Waa isbeddelada jawiga keena sababaha isbedbedelka heerkulka iyo cimilada lidka ku ah ee loo rogo cimilada wanaagsan.
Maxaa loogu magac daray Quince Summer?
Waxaan soo sheegnay inay sidoo kale hesho magacan waana sababta oo ah taariikhahaas waa marka quince la soo qaado.
Muddadan waxaa baabtiisay beeraleyda oo tixraacay waqtiga goosashada dalaggan. Markii hore, quinces waxaa ilaalin jiray ilaahadda jacaylka Aphrodite. Sidaa awgeed waxa la yidhi quince waa midhihii jacaylka.
Ma jiraa xagaa San Miguel sanad walba?
Xagaagan yar wax kale ma aha ee waa jawiga jawiga sanadlaha ah. Inta lagu jiro taariikhahan heerkulku wuu kacaa si uu usbuuc usii jiro ka dibna mar kale u soo dhaco. Mareykanka wuxuu leeyahay dhacdo la mid ah oo la yiraahdo Xagaaga Hindiya (Xagaaga Hindida). Wadamada ku hadla Jarmalka waxaa loogu yeeraa Altweibersommer.
Dhab ahaantii wax aad u eg ayaa ka dhacaya koonfuurta koonfureed qiyaastii Juun 24. Iyaga, xilliga qaboobaha ayaa bilaabmaya waqtigan. Si kastaba ha noqotee, qiyaastii maalinta San Juan, heerkulku wuxuu soo laabanayaa waxoogaa ka sarreeya kan halkan jooga. Waxay ugu yeeraan xilligan xagaaga San Juan.
In kasta oo ay jiraan oraahyo saadaasha hawada, saynisku wuxuu sharxi karaa tiro aad u tiro badan oo ah hadalladan caanka ah iyo waxa la aaminsan yahay. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, ma jirto sabab cilmi ah oo lagu caddeeyo xagaagan. Laakiin waa macquul in la sharaxo sababaha qaar sababta ay u dhacdo.
Inta lagu jiro xilliga dabayaaqada Sebtember, xagaaga rasmiga ah ayaa dhammaaday. Waqtigaan, saameynta ugu horeysa ee xilliga qaboobaha ayaa durba bilaabay in laga dareemo jawiga. Waa xilli muhiim ah oo udhaxeeya kala guurka xilliyada oo maalmaha qabow badanaa la dhexgalo kuwa diiran. Sidaa darteed, jawiga isbedelaya badanaa waxay sababtaa maalmo yar oo jawiga wanaagsan ah ka dib dhibcaha ugu horreeya ee heerkulka xilliga dayrta.
Maahan in sanadwalba ay jirto xagaa San Miguel. Waa isbeddel sii socda sannadba sanadka ka dambeeya laakiin maahan inuu dhaco.
Caqabado iyo xagaa kale
Waxaa jira sannado badan oo xagaaga uu jiray San Miguel, laakiin kuwa kale oo aan ku jirin. Waxaa jira isbeddel kale oo la mid ah taariikhaha ku dhow Nofeembar 11, oo ah maalinta loo dabaaldego San Martín. Maalmahan waxaan la kulannaa "jug" kii ugu dambeeyay ee xagaaga oo leh kor u kaca heer kulka. Xaaladdan oo kale, kororku ma aha mid aad u sarreeya sida xagaaga, laakiin waxay na xusuusinaysaa wax badan oo gu 'ah. Waxaad oran kartaa waa xagaaga oo nooga digaya inuu mar dhow nagu soo noqon doono oo aan dulqaad leenahay.
Taasi xagaaga dhacdo ama ma aha waa arrin suurtagal ah. Maalmaha diiran iyo kuwa qabow ee is-weydaarsiga ah waa wax aad u badan xilliyadan kala guurka sida guga iyo deyrta. Waxaa loogu yeeraa maxaa yeelay waxay ku beegan yihiin taariikhada dabaaldega awliyada.
Haddii aan dib u milicsanno sanadaha, waxaan arki karnaa inay jiraan sannado aynaan helin xagaagii San Miguel. Waxaan daadad ku leenahay Murcia 1664 iyo 1919 (oo leh dhibco dhintey); 1764 Malaga, 1791 Valencia iyo 1858 magaalada Cartagena. Bishii Sebtember 29 iyo 30, 1997, daadad naxdin leh ayaa ka dhacay Alicante
Dhowaanahan waa daadadkii dhacay 27-kii ilaa 29-kii Sebtember 2012 oo ay saameeyeen Lorca, Puerto Lumbreras, Malaga, Almería ama Alicante, oo xitaa galaaftay dhowr qof. Sidaa darteed, ma nihin saynis gaar ah oo dhacdadan diirran ay tahay inay dhacdo sannad kasta.
Erayadii xagaagii San Miguel
Sida aan ognahay, oraahdii caanka ahayd waa mid hodan ku ah wax kasta oo xiriir la leh cimilada iyo dalagyada. Xaaladdan oo kale, kuwani waa kuwa ugu caansan ee loo yaqaan taariikhahaas:
San Miguel, kuleylka weyn, waxay u noqon doontaa qiimo weyn.
Xagaaga San Miguel waxaa jira miro sida malab oo kale
Bishii Sebtember, dhammaadka bisha, kuleylka ayaa mar kale soo noqda.
San Miguel, marka hore walnut, xabadka dambe.
Xagaagii San Miguel ayaa aad u yar
Dhammaan miraha waxay ku wanaagsan yihiin kuleylka San Miguel.
Macluumaadkan, waxaad awoodi doontaa inaad waxbadan ka ogaato xagaagan yar ee aan ugu dabaaldegno farxad wajiga dhibcaha dhow ee heerkulka deyrta iyo imaanshaha qabowga qabow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Xagaagii San Miguel